Thursday November 15, 2018 - 10:17:34 in Wararka by Mogadishu Times
Xili toddobaadkan la xusayay 100 sano guuradii ka soo wareegtay dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa waxaa xaflad lagu xusayo arrintaasi lagu qabtay waqooyiga magaalada London. Waxaa xafladani soo abaabulay ururka saafi oo ah jaaliyad ay Soomaalida le
Xili toddobaadkan la xusayay 100 sano guuradii ka soo wareegtay dagaalkii koowaad ee adduunka ayaa waxaa xaflad lagu xusayo arrintaasi lagu qabtay waqooyiga magaalada London. Waxaa xafladani soo abaabulay ururka saafi oo ah jaaliyad ay Soomaalida leeyihiin, islamarkaana waxaa si gaar ah loogu eegayay dadkii Soomaalida ahaa ee dagalkaasi kowaad ee aduunka ka soo qayb qaatay. Munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay sawirro ka hadlaya dagaalkii kowaad ee aduuunka iyo doorkii ay Soomaalida ku lahaayeen. Wariyaha BBC Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa ka qayb galay xafladdaasi waxa uuna halkaa kula kulmay qaban qaabiyaha munaasabadan Rooda Maxamed, isagoo weydiiyey waxyaabaha ay halkan ku soo bandhigeen"Sawirrada halkan lagu soo bandhigay ayaa ah saddex qeybood oo ka mid ah carwada, mid waa sawirro laga qaaday shaqsiyaad, sawiirada halkan yaalla waxaa ka mid ah kuwa la qaaday 1926dii, waana ciidan Soomaaliyeed oo ka qayb galay dagaalkii 1aad"